Ihe omuma ihe na-ekwu banyere ihe ngwugwu kachasị ike na nchịkọta weebụ
RCrawler bụ ngwanrọ dị ike nke na-agba ma nchịkọta weebụ ) ma na-asọgharị n'otu oge ahụ. RCrawler bụ ngwugwu R nke gunyere njirimara dị iche iche dịka ịchọpụta ọdịnaya ejiri ederede na nbudata data. Ngwá ọrụ ntanetị a na-enyekwa ọrụ ndị ọzọ dịka nzacha data na ntanetị weebụ - can you rent laptops.
Eziri nke ọma na edekọ data siri ike ịchọta. Enwere otutu data dị na Intaneti na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị usoro. Nke a bụ ebe RCrawler software na-abata. RCrawler ngwugwu ezubere iji zipu arụmọrụ na-arụ ọrụ na gburugburu R. Akụrụngwa na-agba ma ntanetị weebụ ma na-agba agba n'otu oge ahụ.
Gini mere ntaneti web?
Maka ndị mbido, ntanetị weebụ bụ usoro nke na-achọ inweta ozi sitere na data dị na Intaneti. A na-ejikọta ihe ntanetịime na nchịkọta atọ na - agụnye:
Ntanetị ọdịnaya weebụ
Ihe ntanetịime weebụ gụnyere iwepụta ihe bara uru site na scrape site .
Nhazi ihe owuwu weebụ
Na ntinye ihe owuwu weebụ, a na-amịpụta ihe dị iche iche n'etiti ibe ya ma gosipụta dịka ọkwa zuru ezu ebe ndị na-eguzobe peeji nke na njedebe na-anọchite anya njikọ.
Ntanetịime weebụ na-etinye uche n'ịghọta àgwà njedebe onye njedebe n'oge nleta ntanetị saịtị.
Gini bu ndi na-acho n'igwe?
A makwaara dị ka spiders, crawlers weebụ bụ mmemme na-akpaghị aka na wepụ data site na ibe weebụ site na isoro hyperlinks kpọmkwem. Na ntanetị weebụ, ihe nchọgharị weebụ na-akọwa site na ọrụ ha na-eme. Dị ka ọmụmaatụ, ndị ọrụ crawlers nwere mmasị 'na-elekwasị anya n'otu isiokwu site na okwu ahụ gaa. Na ntinye aha, ndị na-ahụ maka crawlers weebụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa site n'inyere ibe weebụ ọrụ ntanetị aka ịchọpụta..
N'ọtụtụ ọnọdụ, crawlers weebụ 'na-elekwasị anya n'ịchịkọta ozi site na ibe weebụ. Otú ọ dị, a na-akpọ crawler weebụ nke na-ewepụta data sitere na ntanetị na saịtị mgbe ọ na-agba agba ka ọ bụ ihe ntanetị weebụ. N'ịbụ onye na-agba ụyọkọ multi-threaded, RCrawler na-ewepu ọdịnaya dịka akwụkwọ ndị na-ahazi metadata na utu aha.
Gini mere RCrawler ngwugwu?
Na ntanetịime weebụ, ịchọta na ikpokọta ihe ọmụma bara uru bụ ihe niile dị mkpa. RCrawler bụ software na-enyere webmasters aka na ntanetị weebụ na nhazi data. Kọmputa RCrawler gụnyere ihe nchịkọta R dịka:
nchịkọta R parse data site na URL. Iji nakọta data site na iji nchịkọta ndị a, ị ga-enye aka URL. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ọrụ njedebe na-adabere na ngwá ọrụ scraping mpụga iji nyochaa data. N'ihi nke a, a na-atụ aro R ngwugwu iji mee ihe na gburugburu R. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mkpọsa gị na-ekpo ọkụ na-ebi na URLs kpọmkwem, tụlee inye RCrawler a gbara.
Rvest na ScrapeR nchịkọta chọrọ nnyepụta nke URL saịtị na mbu. N'ụzọ dị nro, tm.plugin.webmining ngwugwu nwere ike nweta ngwa ngwa nke URL na JSON na XML formats. Ndị na-eme nchọpụta na-eji RCrawler chọpụta ihe ọmụma sayensi. Otú ọ dị, a na-atụ aro software naanị maka ndị nchọpụta na-arụ ọrụ na gburugburu R.
Ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ na ihe ndị chọrọ chọrọ ka RCrawler nwee ọganihu. Ihe ndị dị mkpa na-achịkwa otú ọrụ RCrawler si agụnye:
Ịdị mfe - RCrawler gụnyere nke ịmepụta nhọrọ dịka ntụgharị miri emi na akwụkwọ ndekọ.
Parallelism - RCrawler bụ ngwugwu nke na-ejikọta ya na akaụntụ iji mee ka arụmọrụ ahụ ka mma.
Arụmọrụ - Ihe ngwugwu ahụ na-arụ ọrụ n'ịchọpụta ọdịnaya dị iche iche ma na-ezere ọnyà na-awagharị.
R-native - RCrawler na-akwado ntanetị weebụ ma na-efegharị na gburugburu R.
Ọchịchị - RCrawler bụ ngwugwu dabeere na gburugburu ebe obibi R nke na-erubere iwu isi mgbe ị na-ekpuchi ibe weebụ.
O doro anya na RCrawler bụ otu ngwanrọ nke kachasị ike nke na-enye ọrụ dị iche iche dịka ntinye ederede, ntanetị HTML, na njikọ nhazi. RCrawler na-achọpụta ngwa ngwa mbiputegharị ọdịnaya, ihe ịma aka na-eche ihu na saịtị na ike. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ data, RCrawler kwesịrị ịtụle ya.